Urur loo sameeyay xayawaanka Somaliland - BBC Somali
Urur loo sameeyay xayawaanka Somaliland
26 Agoosto 2014
Image caption Gaadhi-dareemarka biyaha u dhaamiya qeybo ka mid ah Hargeysa
Waxaa markii ugu horeysay Somaliland laga sameeyay urur daryeela xayawaanka ay dadku manaafacaadsadaan. Waxaa sameeyay ururkaasi oo ah mid samafal koox aqoonyahanno oo is xilqaamay.
Gudoomiyaha ururkaasi Cali Xasan Xirsi ayaa ii sheegay in sameynta ururka ay ku kalliftay markii ay arkeen tacaddiga baahsan ee lagula kaco xayawaanka dadka la dhaqma. Wuxuu sheegay inay doonayaan inay daryeelaan intii karaankooda ah dameeraha, bisadaha, eyda, iyo ugaadha duurjoogta ah ee inta miyigii laga keenay lagu xabisay ayuu yidhi huteellada iyo guryaha waaweyn.
Ururkan ayaa waxay shaqadoodii ugu horeysay ka bilaabeen iyagoo seminaar u qabtay in ka badan labaatan ruux oo ah dadka ku xoogsada gaadhi-dameerka oo ay barayeen xanaaneynta dameeraha ay ku xoogsadaan ee biyaha ay ku dhaamiyaan amaba alaabta ay ku xammaalaan.
Cali Xasan Xirsi wuxuu ii sheegay inay bareen dadkaasi dameeraha ku shaqeysta sida loo daweeyo, sida loogu dhigo cawska iyo cuntada, rarka inta uu qaadi karo dameerku iyo inta kilo ee uu yahay miisaankiisu.
Dadka ku xoogsada dameeraha oo aan qaarkood wareystay ayaa ii sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin ururkan daryeelka xayawaanka taasoo ay qireen inay tahay markii ugu horeysay ee ay arkaan urur wax u qabanaya.
Dadkaasi waxay BBC uga sheekeeyeen siday dameerku uga waxtar badanyahay ay yidhaahdeen xataa geela iyo xoolaha kale iyo xifaaltanka bulshada dhex marta markay wadaan dameerka.